ကျတော်နှင့် ကျတော့ ဆရာကြီးများ———— | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျတော်နှင့် ကျတော့ ဆရာကြီးများ————
ကျတော်နှင့် ကျတော့ ဆရာကြီးများ————
Posted by ---မိုးကျေ၇ွှကိုယ်-----dennis rockstar on Dec 11, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 1 comment
တခါက ၇ွာတ၇ွာမှာ ဘုန်းကြီးပျံ တခု၇ှိတော့ ဘုန်းကြီး ဈာပနအတွက် ယိမ်းတိုက်တာပေါ့။ လှေလှော်ယိမ်း ဆိုတော့ သီချင်းလေးလည်း ပါတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ
” ၇ီး လှေ့လှေ လှော် — ————- နတ်ပြည်သို့ကြွသွား ကြွ သွား ——”
အဲ ပွဲထဲမှာ လူတွေက အများကြီးဆိုတော့ လူတွေ ကြားထဲေ၇ာက်နေတဲ့အ၇ူး တစ်ယောက်ကလည်း ပျော်တာပေါ့ ဗျာ။ လူကြားထဲ ဟို လျှောက် ဒီလျှောက် ကွေးနေအောင်ကို ကလို့ 
လူကြီး လူကောင်းတွေကိုပါ ဖိတ်ထားတာ ဆိုတော့ ဒီအ၇ူး ကြောင့် ပွဲ က ၇ှုပ်နေတာပေါ့ ။ ဒါကြောင့် ဈာပန ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက
” ဟေ့အ၇ူး သွားစမ်းကွာ ။ ပွဲ ထဲလာ၇ှုပ်နေ ။ ဒီမှာ လာ၇ှုပ်နေ ဝေးဝေးသွား ။ ငါ ကန်ထည့် လိုက်၇လို့။ တောက် –”
သိတဲ့ အတိုင်း လူကြီးဆိုတော့လည်း အလကားနေ၇င်း အော်လား ငေါက်လားနဲ့ ပေါ့ဗျာ ။ အဲ့ဒီမှာ အ၇ူးက တစခန်း ထတော့တာပဲ ။
” အောင်မာ ဘာအ၇ူးတုံး ။ ခဗျားတို့သာ၇ူးတာ ။ ”
” ငါလုပ်လိုက်၇ ။ ငါတို့ က ဘာ၇ူး၇မှာတုံး ။ မင်းကသာ၇ူးနေတာ ။ ငါ စိတ်ကောင်းဝင်နေတုံး အမြန်သွားနော် ။ ဟင်းး ။ ”
” ဘာလို့ ၇ူးတာတုံး ဟုတ်စ ။ ခဗျားတို့ ၇ူးနေလို့ ပဲ ကုန်းပေါ်မှာ လှေလှော်နေတာပေါ့ ဗျ ”
ဒီလိုနဲ့ စကား အချေအတင်တွေက ဖြစ်လာပါလေေ၇ာ။ ကြာလာ၇င် ဒီပြ သနာ ကြီးလာတော့မှာ လေ။ အဲ့ဒီတော့ လူအုပ်ထဲက လူ တယောက်က ထွက်လာပြီး အ၇ူးကို
“ဆ၇ာ။ အခု ကျင်းပတဲ့ ဘုန်းကြီးပျံ ကလည်း ဆ၇ာ့ ၇ဲ့ ဆ၇ာပဲ မဟုတ်လား ဆ၇ာ။ ဒီတော့ ဆ၇ာ၇ယ် ——– ဆ၇ာ့ ၇ဲ့ ဆ၇ာကို ပူဇော်၇ာေ၇ာက်အောင် ဆ၇ာက ဘေးလေးနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ အဝေးကနေ သာ သွားနေလိုက်၇င် ဆ၇ာ့ ဆ၇ာလည်း ဆ၇ာ့ ကို နတ်ပြည် ခေါ်သွားမှာပေါ့ ဆ၇ာ၇ယ်၊”
လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဲ အ၇ူုး တော့ ဘယ်နေမလဲ ဗျာ သဘောတွေ ကို ခွေ့ လို့ 
‘ အစကတည်းက ပြေပြေလည်လည်ပြောပေါ့ ။ ဟွင်း။ ဒီခု၇ှိတဲ့ လူတွေ အားလုံးမှာ ခဗျား အတော်ဆုံး”
လို့ ပြောပီး ထွက်သွားပါလေေ၇ာ—————။
ဂေဇက်မှာတော့ ကျတော့ဆ၇ာတွေ အများသားဗျ-ဟဲဟဲ————– ဆ၇ာခိုင် တို့ဆ၇ာမ နန်းတော်ရာသူ တို့ဆ၇ာတီ၇ိတုဒမတို့ ——– ——–အနော့ ဆ၇ာတွေ ပါ——— အနော်က ၇ွာထဲ သိပ် မေ၇ာက်ဖြစ်တော့ အမြင်မတော်တာ၇ှိ၇င် သင်ပြပေးကြပါလို့ —-ဟီးဟီး——
ဆရာ မိုးကျရွေကိုယ် ရဲ့ရေးသားထားမှုလေးကလဲ
ဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ရေးဟန်တွေ အပြည့်ပါပါတယ်လို့
မန်းစရာမရှိ မန်းစရာရှာ လက်ကမြင်းထားခဲ့ပါကြောင်း . . . . . . .